नेपाली विधार्थीलाई १ करोड बराबरको छात्रबृत्ति दिइने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपाली विधार्थीलाई १ करोड बराबरको छात्रबृत्ति दिइने
प्रकाशित मिति: १६ असार २०७१, सोमबार
काठमाडौं, युनिभर्सल ग्रुप अफ ईन्स्टिच्युशन चन्डीडढ इन्डियाले नेपाली विधार्थीलाई करिव १ करोडको छात्रावृत्ति तथा आर्थिक सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनिभर्सल ग्रुप अफ ईन्स्टिच्युशन चन्डीडढ इन्डियाले नेपाली विधार्थीहरुलाई यस्तो विशेष छात्रावृत्ति दिने घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डा. गुरुप्रित सिंहले यस वर्षको शैक्षिक सत्रको लागि करिव ६० जना नेपाली विधार्थीलाई जनही दुइ लाखको दरले विशेष छात्रावृत्ति दिने जानकारी दिनु भयो ।
उहाले भन्नु भयो,विधार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न आर्थिक रुपले कुनै बाधा नहोस भन्ने हेतुले हामीले नेपालका विधार्थीलाई यस्तो अवसर सृजना गरेका छौं । मलाई विश्वास छ, यसबाट नेपाली विधार्थीलाई पूर्ण रुपमा लाभ हुनेछ ।
सिंहले गरिव, मेहनती तथा जेहेन्दार विधार्थीहरुलाई उनीहरुको शैक्षिक प्रस्तुतीको स्तरीयताको आधारमा मात्र छात्रवृत्तिको रकम घोषणा गर्ने पनि बताउनु भयो ।
सिंहले युनिभर्सल ग्रुप अफ ईन्स्टिच्युट सवै जेहेन्दार विधार्थीलाई उच्च शिक्षा दिन आतुर रहेको पनि जानकारी दिनु भयो । उहाले भन्नु भयो, हामी चाहन्छौं कि सक्षम र योग्य विधार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुन नपरोस् । र हामीले उनीहरुको लागि यस्तो सेवा दिएर सवै देशमा आफ्नो संस्थाको सकारात्मक सन्देश पनि दिएका छौं ।
युनिभर्सल ग्रुप अफ ईन्स्टिच्युशन चन्डीडढ इन्डिया एआइसीटीइ, नयाँ दिल्ली र पन्जाव सरकारुंग आवद्ध रहेको छ भने पन्जाब टेक्निकल युनिभर्सीटी (पिटियू) जलान्धार संग एफिलिएटेड छ । जहाँ अहिले बिटेक, एमटेक,एमवीए, बीबीए, बीसीए। पोलीटेक्निक, इटीटी, बीएड लगायतका एकेडेमिक सेसनहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।
एक लाखले दिइसके लोकसेवामा आवेदन, परीक्षा हुने-नहुने अन्योल
काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा विज्ञापन खोलेपछि बुधबारसम्म एक […]
नागपञ्चमी : सर्प, अग्नि र चट्याङको भयबाट बच्न नागको पूजा
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी आज परम्पराअनुसार नागको तस्वीरसहित […]
अष्ट्रेलिया, नेपाली चलचित्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तारित हुने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय विभिन्न […]
के हो वेद ? वेदबारे जान्नैपर्ने कुरा,चारै वेदको संक्षिप्त परिचय
वेद विश्वका सबै धर्म ग्रन्थहरूको पिता हो । वेदबाट नै साभार गरेर अन्य धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू निर्माण गरिएका […]
खराब मौसमका कारण आठ सय पर्यटक अलपत्र
नयाँ दिल्ली। अत्याधिक खराब मौसमका कारण भारतको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने अन्दामन र निकोबार टापुमा स्वदेशी […]
पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलले पारसलाई छुटाउन कुनै पहल नगर्ने
असोज २६ । काठमाडौ,पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमलले थाइल्यान्डमा पक्राउ परेका छोरा पारस शाहलाई अहिले सम्म […]